Manaova famandrihana (maimai-poana) ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2008 8:13 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, Español, srpski, Italiano, English
Amin'ny mahampamaky Global Voices anao, dia fantatrao tsara ny fahamatoranay sy ny fiezahanay hampifandray mandrakariva ny mponina. Miangavy anao izahay hanao famandrihana (maimaipoana) amin'ny lisitra imailakanay! Afaka mifidy tsara ianao amin'izay fepotoana (fahatetehana) hahenoanao vaovao avy aminay.
Ankoatra izany hifanampiana ihany koa? Miangavy anao izahay hampirisika ny fianakavianao, ny namanao, ny mpiara-miasa aminao hamandrika amin'ny alalan'ny mailaka ny Global Voices ihany koa. Arakaraky ny hamaroan'ny mponina no hahatsara ny fifampiresahana ankapobeny.
Ho antsika rehetra hafa kosa, mbola mandeha soa aman-tsara ny RSS feeds.
56 minitra izayAzia Atsinanana
16 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana